ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိကိုသိထားသင့်သည့် ဗုဒ္ဓ၏မှတ်တိုင်နေ့ထူးကြီး (၂၀)
၁. မဟာသက္ကရာဇ် ( ၆၇ ) ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် ကြာသာပတေးနေ့ သန်းခေါင်ယံအချိန်၌ ပဋိသန္ဓေ တည်နေတော်မူ၏။
၂. မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့ နေမွန်းတည့်ချိန်၌ ဖွားမြင်တော်မူ၏။
၃. မဟာသက္ကရာဇ် (၈၃) ခုနှစ် (၁၆) နှစ်သားအရွယ် ကဆုန်လတွင် ထီးနန်းအုပ်ချုပ် မင်းပြုလုပ်တော်မူ၏။
၄. မဟာသက္ကရာဇ် (၉၇) ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့် တင်္နလာနေ့ သန်ခေါင်းယံ အချိန်၌ တောထွက်တော်မူ၏။ (၂၉).နှစ်အရွယ် ။
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက မိန့်ကြားဖူးပါတယ်။ “ပုထုဇင်တွေဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အိပ်ပျော်နေချိန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကုသိုလ် သို့မဟုတ် အကုသိုလ်စိတ် တစ်ခုခုနဲ့နေကြတာ”တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာဟာ တစ်ပြိုင်တည်း နှစ်စိတ်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင် ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်နိုင်သလို ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်း အကုသိုလ်စိတ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကတော့ ကုသိုလ်လည်းမဖြစ် အကုသိုလ်လည်း မဖြစ်တဲ့ဘ၀င်စိတ်ပါ။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ဘယ်လိုဖြောင့်အောင် လုပ်ရမလဲ?။
အရှင်ဘုရား၊ မေးလိုသောအကြောင်းမှာ ရှေးဟောင်းရှမ်းစာပေ၌ သာသနာငါးထောင်နှင့် ပတ်သက်သော သာသနာတောင်းပန်စာ လင်္ကာတွင်-
(၂) ရဟန္တာအရှင်မြတ် တောင်းပန်သောကြောင့် သာသနာနှစ် ၁-ထောင်။
(၃) မလ္လာမင်း တောင်းပန်သောကြောင့် သာသနာနှစ် ၁-ထောင်။
(၄) သိကြားမင်း တောင်းပန်သောကြောင့် သာသနာနှစ် ၁-ထောင်။
(၅) ဘီလူးမင်း တောင်းပန်သောကြောင့် သာသနာနှစ် ၁-ထောင် ဟု ဆိုထားပါသည်။
ယုတ္တိယုတ္တာ ရှိ-မရှိ၊ ပိဋကတော်နှင့် ညီ-မညီ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
( ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒာစရိယ-ဒက္ခိဏာရုံကျောင်း၊ နန့်ခမ်းမြို့)
ရေစက်ချ အမျှဝေတာ ဘာကြောင့်လဲ...?